Review: Vestron Video Collector's Series dia namoaka an'i Francis Ford Coppola 'Dementia 13' tao amin'ny Blu-Ray - iHorror
Home Blu Rays Famerenana: Vestron Video Collector's Series dia mamoaka an'i Francis Ford Coppola 'Dementia 13' ao amin'ny Blu-Ray
Famerenana: Vestron Video Collector's Series dia mamoaka an'i Francis Ford Coppola 'Dementia 13' ao amin'ny Blu-Ray
by Jacob Davison Septambra 23, 2021
by Jacob Davison Septambra 23, 2021 102 hevitra
Miverina indray ny Vestron Video miaraka amina famoahana andian-dahatsoratra mpanangona vaovao azo antoka fa hanodina lohany. Raha ny ankamaroan'ny taratra blu-ray azy ireo dia efa 80 ny vidiny tahaka ilay sarimihetsika mpitaingina matoatoa NY FIVAVAHANA, handeha hianatra antitra izahay miaraka amina endrika voalohany an'ny mpanatontosa sarimihetsika amerikana lehibe indrindra ao Francis Ford Coppola Dementia 13! Nosoratana / Nosoratana tamin'ny taona 1963 ary novokarin'i American International Pictures sy Roger Corman, ity no sary mihetsika lehibe voalohany an'i Coppola ary ilay nanome azy ny fiatombohany.
Sary avy amin'ny IMDB
Manaraka an'i Louise ny tantara (Luana Anders, Easy Rider) ny vadin'i John Haloran mikorontana izay tezitra fa ny ankamaroan'ny fananan'ny reniny dia omena ho an'ny fiantrana amin'ny anaran'i Kathleen Haloran, rahavavin'i John. Nandritra ny ady hevitra tamin'ny lakana an-tsambo dia maty i John ary natsipin'i Louise tao anaty rano manjavozavo ny fatiny mba hanaronana azy mba hahafahany hanana vintana hahazoana harena sasany ao amin'ny fianakaviana. Nandehandeha tany amin'ny Estate Haloran any Irlandy i Louise, namorona tetika hanandramana sy handresy lahatra an-dRamatoa Haloran tsy mino an-tsoratra hanoratra azy ao anaty sitrapo, tsy fantany fa miafina ny trano lehibe ny tsiambaratelon'ny fianakaviana maizina ary tsy azo halevina mandrakizay… tsiambaratelo maizina misy famaky!
Fampientanentanana ara-tsaina gothika vita taorian'ny fisian'i Alfred Hitchcock's Psycho, Ny mason'i Coppola ho an'ny fananganana fihenjanana sy ny sehatra toa nofinofy dia miharihary na dia amin'ny fisehoany voalohany ho an'ny fampihorohoroana ara-psikolojika aza. Miaraka amin'ny filaharan'ny fisalasalana be dia be izy ireo hiaraka aminao elaela. Ny tsangambato famelezana aloky ala dia tsy hay hadinoina ary nanaitra ahy fa tsy voatonona firy amin'ny faribolan'ny horohoro izy ireo rehefa tonga amin'ity vanim-potoana ity. Ny ambanivohitra Irlandy sy ny maritrano gothic dia manao toerana tokana izay toa manaitra ny mainty sy fotsy. Miaraka amin'ny famindrana vaovao vaovao 4K amin'ity andiany blu-ray ity, aseho amin'ny fahitana mazava kristaly izay toa tsy misy tomika sy mahavariana ilay sary. Coppola tenany manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny sarimihetsika amin'ny famaritana avo tahaka izany miaraka amina pirinty manokana avy amin'ny arisivany hamoaka azy io ho toy ny notapatapahan'ny talen'ny azy, nitanisa hoe:Dementia 13 Mazava ho azy fa mitana toerana ao am-poko ho sarimihetsika voalohany ary tena mirehareha aho fa afaka misy izany araka ny niniako azy. ”
Ireo endri-javatra manokana koa dia fisarihana lehibe amin'ity famotsorana ity. Manasongadina fampidirana avy amin'i Francis Ford Coppola tenany, fanehoan-kevitra mahaliana nataon'i Coppola, ary na dia ilay tany am-boalohany aza Dementia 13 Prologue gimmick fitsapana navoaka voalohany tamin'ny sarimihetsika. Sahala amin'ny intro nataon'i Hitchcock sy ny hafetsen'ny matoatoa an'i William Castle, ny andrana dia fihantonana mba hahasarika ny sain'ny mpanatrika. Raha ny tena izy dia fitsapana ara-psikolojika 'tena izy' nolalaovina alohan'ny horonantsary hijerena raha toa ka milamina tsara ny mpijery mijery sarimihetsika mampihoron-koditra tokoa. Nalaina sary tao amin'ny "Institute of Hypnosis any Los Angeles"! Ny fonosana amin'ity famotsorana ity dia tsara, misy ny kanto minimalista mampihoron-koditra ho an'ny fahatapahan'ny tale. Na dia iriko aza fa azo ovaina ilay izy Dementia 13afisy am-boalohany sy pulp hafa avy amin'ny famoahana tany am-boalohany sy nidera ireo gimikika tafiditra tao.
Amin'ny ankapobeny, Dementia 13 dia famindrana horonantsary an-trano mahatalanjona nohavaozina tamin'ny sarimihetsika voalohany an'i Coppola ary antenaina fa hampiharihary mpijery betsaka kokoa an'io mpientanentana vaovao io tamin'ny taona 60 tany ho any.
Dementia 13 Hita amin'ny blu-ray sy nomerika izao.